प्रकाशित मिति १९ मंसिर २०७५, बुधबार ०६:३० लेखक नेपाली जनता
देउवा सरकारको यो निर्णयबाट किन हच्किए ओली ?
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउनेबारेमा कुनै पनि निर्णय नगरेको जनाएको छ । सरकारको यो भनाइसँगै प्रदेश प्रमुखहरूको पद…
माओवादीले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता भएन, सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगकाे उजुरी बिचाराधिन !
रुकुम । तत्कालिन नेकपा माओवादीले द्वन्द्वको समयमा कब्जा गरिएका जग्गा तथा सम्पत्ती…
सबैभन्दा धेरै डिभोर्स गर्ने हलिउड सेलेब्रिटी
क्यालिफोर्निया । ‘हलिउडमा बिहे भए धेरै समय टिक्दैन’ भन्नेहरुको कमी छैन । त्यसैले हलिउडका जोडीहरुको सम्बन्न केही वर्ष मात्रै…
​नेकपा नेतृसँग मिलेर ‘सेनानी’को ठगी धन्दा 367 views